Khombisa Led, Led Sign, Digital Signage - Yonwaytech
I-Shenzhen Yonwaytech Co., Limited ingumkhiqizi wesibonisi se-LED esuselwe eShenzhen PRC.
Umkhiqizo ofaka phakathi i-Outdoor LED Screen, Indoor LED Display, Screen Narrow Pixel Pitch HD LED Screen, LED Screen For Stage Rental and Outdoor Facade LED Display.
Sikholelwa ekuqondisweni kwamakhasimende, iYonwaytech ihlala ihlanganyela ekunikezeni ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ngomsebenzi wethu.
Konke ku-Plug Retail eyodwa nokudlala i-LED Poster
I-Easy Operation plug kanye nokudlala uhlelo okulungiselelwe ngaphakathi, akudingeki i-PC, ukonga izindleko okuningi nokusebenziseka kalula. Isisindo esincane nesincane esakhiwe nge-pixel 1.8mm / 2.0mm /2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm ngo-80 "ububanzi 640mm × ukuphakama 1920mm.
Isisindo esilula kakhulu, ukusebenza okulula ngamalokhi asheshayo nezixhumi zokufakwa okungaguquki noma okulenga. Ikhava yemodyuli eholelekile ethambile futhi ikhava ephezulu yekhabethe yekhwalithi ephezulu ukuvikela ukulimala kokushayisana ngesikhathi somcimbi wezemidlalo. IKhabethe le-Magnesium alloy elinokushiswa okuhle kokushisa nesakhiwo esiqinile. Isilinganiso sokuvuselela se-IP65 nesilinganiso sokuvuselela esingu-3840hz esihle ekusetshenzisweni kwenkundla yezemidlalo nokuqoshwa kwevidiyo.
Isikrini se-LED Esisebenzelana Ngokudansa.
I-Intelligent floor tile ekhonjisiwe, ihlanganiswe ne-interactive drive drive IC ngaphakathi kwe-0.02 millisecond. Isakhiwo sekhabethe esiqinile futhi esiqinile, kulayishwa amathani wangempela ama-2 ngemitha eyisikwele. I-IP65 ayinamanzi, ayina uthuli, isiliphu sokulwa nokuklwebheka. Isetshenziswe ngokuqinile kuma-disco, ezinkantini, ku-T-stage, kumakhonsathi nakumadrama. imicimbi kanye nokufakwa okungaguquki. Ilungele ukusetshenziswa kwesikhashana emibukisweni, imibukiso yemoto, imibukiso yemfashini noma imibukiso ye-TV.
Izinhlobo Ezihlukahlukene Zokukhonjiswa kweModyuli ye-LED
I-P2.5 yangaphandle, i-DIP P10 P16, i-Indoor Soft Flexible. Esinokwethenjelwa module kwaholela ukusetshenziswa endlini nangaphandle, anhlobonhlobo kwe-pixel iphimbo inketho.
I-STADIUM ARENA SPORT PERIMETER LED BONISA
Umakhi Wakho Wokwethenjelwa we-One-stop LED Display & Exporter.
Insiza eku-inthanethi engu-7x24 nokusekelwa
I-7 × 24 hrs ukuxhumana okusheshayo, impendulo esheshayo, isiphakamiso sephrojekthi yamahhala, insizakalo yokuphendula yokukhiqiza esondelene, uhlelo lokusebenziseka okulula, ukulethwa ngokushesha.
Ikhwalithi ephezulu ngentengo enengqondo
Sigcina intengo enengqondo ngekhwalithi ethembekile. Ungalokothi unikele ngekhwalithi, sihamba nemikhiqizo ephezulu kuphela. Sigcina ukubambisana okuqinile neNatiosnstar, Kinglight, MarcoBIock, Meanwell ukuqinisekisa imikhiqizo yethu ukuthi isebenzisa ubuchwepheshe obunqenqemeni bokuhola emakethe
Isipiliyoni Seminyaka engu-13 + Ekubonisweni Kwe-LED
Ithimba lethu eliqinile elinekhono elihle kakhulu lokuklama nokukhiqiza ku-mechanical and electronics. Sikwazisa ukwethenjwa ngakunye kwamakhasimende ethu futhi senza imibono yabo igcwaliseke. Isipiliyoni seminyaka engu-13 + ekukhonjisweni okuholwa, sikhiqiza futhi sithumele ukuthembela ezandleni zakho.
Ububanzi Obubanzi Bomkhiqizo Wokubonisa we-LED Ongakukhetha
Sakha uhla oluphelele lokuboniswa kwe-LED, ngaphakathi nangaphandle, ukuqasha, iphimbo elincane le-pixel, izicelo ezimakethe ze-DOOH, imibukiso, imicimbi yezigaba, ingqungquthela, izibhedlela ezithengisa kabusha, iziteshi ze-TV, amakhonsathi, amasonto nokunye. Isevisi yokubonisa ehlelwe ngokwezifiso ingatholakala ku-YONWAYTECH
Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile Ngesikrini Sethu se-LED
Ngomoya wobuqotho, inhlonipho, ukusebenza kahle nozwela, iYonwaytech yakha futhi igcine ukuthembana okujulile namakhasimende ethu, abathengisi kanye nethimba lethu. Ngaso sonke isikhathi sihlanganyela ekunikezeni izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ngomsebenzi wethu kuwo wonke amakhasimende ethu kumazwekazi ayisithupha, sizoqhubeka sikhula ngokuqinile ukuze sikusebenzele kangcono.
Njalo ukubonisa okuholwa ngabantu bayazi ukuthi ukubonisa okuholwa ngaphandle kufanele kube nezinga elihle lobufakazi be-IP ukuqinisekisa ikhwalithi enhle. Onjiniyela be-R & D be-YONWAYTECH LED display manje bamane bahlunge ulwazi lwe-LED ekhombisa ukungena manzi kuwe. Ngokuvamile, izinga lokuvikelwa kwesikrini sokubonisa se-LED yi-IP XY. Okwe ...
Uyini umehluko ekubonisweni kwe-LED, i-LCD, i-Projector ne-DLP?
I-LED yi- “Light Emitting Diode”, iyunithi encane kunazo zonke ingu-8.5 inch, ingakwazi ukugcinwa kwe-pixel nokuguqulwa kwemodyuli yeyunithi, isikhathi sempilo ye-LED ngaphezu kwamahora angama-100,000. I-DLP iyi- "Digital Light Procession" elingana no-50inch ~ 100inch, isikhathi sokuphila cishe ngamahora ayi-8000. Udinga ukushintshwa okuphelele uma kuqhathaniswa isibani nephaneli ...
Izindlela zokulondolozwa kwesibonisi esiholelekile zihlukaniswe kakhulu ekulungisweni kwangaphambi nangemuva kokugcinwa. Ukulungiswa emuva okusetshenziselwe izikrini ze-LED zokwakha izindonga zangaphandle, kufanele yakhelwe ngohlangothi olungemuva lwephaseji ukuze umuntu enze ukulungiswa nokulungisa kusuka ngemuva kwesikrini ...